China Pre-ngolwandle Ukuhlolwa Manufacturers kunye Suppliers | CCIC
Inkonzo yokuhlola ukuhambisa ngenqanawa ngaphambi kokuhlola ukuthunyelwa kwenqanawa (i-PSI) ikwabhekisa kuhlolo lwe-Fina olusebenzayo (i-FRI), yenzeka xa ukurhweba kugqitywa nge-100%, kupakishwe kwaye kulungele ukuthunyelwa okanye ubuncinci iipesenti ezingama-80 zobuninzi bokugqityelwa ukupakisha kunye nokunye okusele kungama-20. I% iya kugqiba ukuvelisa kwaye ilungele isampulu. Isampuli engacwangciswanga yeempahla ezigqityiweyo ziya kutsalwa, ngokusekwe kwindlela yokuvavanywa kweesampulu ezingacwangciswanga, eyaziwa njenge ANSU / ASQC Z1.4, MIL-STD-105E, BS6001, DNI40080, ISO2859 okanye i-NF X06-0 ...
Inkonzo yokuhlola ngaphambi kokuhambisa
Nokuhlola ukuthunyelwa Pre (PSI) nezaziwa fina nokuhlola random (NGOLWESIHLANU), kwenzeka xa merchandises yi-100% lugqityiwe, zipakishwe yaye ukulungele ukuthunyelwa okanye ubuncinane 80% leqashiso selugqityiwe zopakisho abanye-20% iya kuxelwa nayo imveliso sekugcineni yaye ukulungele ukukhiwa. Isampuli engacwangciswanga yeempahla ezigqityiweyo iya kutsalwa, ngokusekwe kwindlela yokuvavanywa kweesampulu ezingacwangciswanga, eyaziwa njenge ANSU / ASQC Z1.4, MIL-STD-105E, BS6001, DNI40080, ISO2859 okanye i-NF X06-002.
View isampula ingxelo
Yenza ntoni i-PSI?
*Kule nxalenye, sijonga ubungakanani ngaphambi kokuba buziswe kumfaki sicelo;
* Ngokungakhethiyo uzobe iisampulu ukuze zihlolwe AQL (Amanqanaba Ubungakanani elamkelekileyo) Standard;
* ukubona Ikakhulu nangobungcibi bamashishini;
* Kwakhona khangela PO, isimbo, umbala, umlinganiselo, bar-code / asolwa / zokuphawula ngetshekhi, ezingxobeni yokuthumela uphawu kunye nezinye ezichazwe yi-sicelo;
* Tywina abo lokuhlolwa iisampuli elungileyo;
* Nika isiphelo esipheleleyo: "UQokelelene neSicelo soMfaki-sicelo", "Ulinde isigqibo soMfaki-sicelo" okanye "akaHanjelwanga kwisicelo soMceli";
* Advice ukuthunyelwa kuphela xa ifuna yi-sicelo okanye umthengi, kungenjalo musa ukuyenza loo nto.
Kutheni ufuna ukuHlolwa ngaphambi kokuthumela?
ukuhlolwa pre-ngolwandle lokugqibela ikhutshwa phandle xa urhwebo iveliswa ngokupheleleyo, zipakishwe kwaye ngandlela zonke ukulungisa ukuthunyelwa, ngoko ke PSI lithuba lakho lokugqibela ukuchonga nayiphi na imiba umgangatho imveliso phambi kokuba iimpahla bekhululwe kwiziko lakho yokuvelisa yathunyelwa yokugqibela yakho indawo efunekayo.
A PSI ebanzi uya ekupheliseni ingozi imveliso olungachananga ukufikelela emnyango yakho kwaye zikunika ukuzithemba kunye neenkcukacha eziyimfuneko ukuze ukwala ukuhambisa yakho kuzama ukwenza isicwangciso amanyathelo afanelekileyo okulungisa kunye nomthengisi wakho kufuneka liqaphele imiba.
Izibonelelo zethu zoKhuphiswano
*Kwiminyaka engaphezu kwama-30 yamava kuhlolwa;
*Abafanelekayo amava ukuhlolwa phawu ASQ okanye AQSIQ;
*Inkonzo yokuphendula ngokukhawuleza, ingxelo yesiNgesi kwiiyure ezingama-24 emva kovavanyo;
*Ixabiso loqoqosho, sibiza i-168- 288 USD ngeentsuku zomntu;
* Eguquguqukayo Ixesha Lungisa, Asinako amalungiselelo uhlolo engxamisekileyo ngokukhawuleza kuwe.
Ityala elininzi lokuhlola abathengi
FUNA ULWAZI OLUNYE?
Okulandelayo: Umgangatho olungileyo PH014
Ukuhlolwa In Control Quality
Control Quality Inspection
Material Testing nokuhlolwa
uality Assurance yokuhlola
Umthwalo yezeeJaji Services Ubungcali
Iinkonzo zokuTshintshela kwiShishini